Ciidamada Booliska AMISOM iyo kuwa Dowladda oo howlgal Roondo xalay ka sameeyey gobolka Banaadir – idalenews.com
Ciidamada Booliska AMISOM iyo kuwa Dowladda oo howlgal Roondo xalay ka sameeyey gobolka Banaadir
Ciidamada Booliska AMISOM iyo kuwa Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay si wada jir ah howlgal roondo ah uga saameeyey xaafadaha gobolka Banaadir, kaasoo qeyb ka ah sugida Amaanka gobolka.
Sida wararku sheegayaan Ciidamadan oo wata gaadiidka Gaashaaman ayaa si feejigan waxay xalay howlgalo Roondo ah uga saameeyeen wadooyinka Degmooyinka gobolka Banaadir Isgoysyada, iyadoo baro Koontarool kaga sugnaa Isgoysyada intii howlgalka xiliga habeenkii ah uu socday.
Saraakisha Ciidamada Booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in howlgalada ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo Amaanka, loogana hortagayo falalka la doonayo in Amaanka lagu qalqalgeliyo.
Ciidamadan Booliska AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya oo horay howlgalada Roondada habeenkii u bilaabay ayaa xalay howlgalkooda waxa uu ahaa mid ka duwan kuwii hore, gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ayay amrayeen inay istaagaan kadibnaa baaritaano culus kula dhaqaaqay.
Ugu danbeyntii Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay Ciidamo gaar ah oo ka qeyb qaata sugida Amaanka degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga hortagaan weeraro la mid ah kii Axadii la soo dhaafay lagu qaaday Xarunta Maxkamada gobolka Banaadir.
Si kastaba ha ahaatee howlgalka Roondada xalay Ciidamada Booliska AMISOM iyo kuwa dowladda ka sameeyeen Xaafadaha gobolka Banaadir ayaa imaanaya xili xalay kooxo bastoolado ku hubeysnaa Askari Boolis ahaa ku toogtay Degmada Wardhiigley.
General Bariise oo ka hadlay qarax culus oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho